लतितपुरलाई स्मार्ट सिटी बनाउने योजना छ - Karobar National Economic Daily
लतितपुरलाई स्मार्ट सिटी बनाउने योजना छ
query_builderOctober 12, 2017 12:43 PM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility4561
कृष्णलाल महर्जन अध्यक्षका प्रत्याशी ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ
ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघको शनिबार हुने ३८ औं साधारणसभाले नयाँ नेतृत्व चयन गर्दैछ । वर्तमान अध्यक्ष सविन श्रेष्ठको कार्यकाल सकिएपछि साधारणसभाबाट नयाँ नेतृत्व चयन हुन लागेको हो । संघमा आबद्ध १ हजार ७ सय उद्योगी–व्यवसायीहरूले ललितपुरको उद्योग व्यवसायलाई सही मार्ग दिन सक्ने नेतृत्व खोजिरहेका छन् । संघको नेतृत्व लिन यतिबेला वर्तमान अध्यक्ष सविन श्रेष्ठ र एक कार्यकाल अगाडिका महासचिव कृष्णलाल महर्जन चुनावी प्रतिस्पर्धामा आक्रामक रूपमा लागेका छन् ।
अध्यक्षका दुवै प्रत्याशीले निर्वाचनको परिणाम आफूअनुकूल बनाउन चुनावी प्रचार–प्रसारमा कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । ललितपुर जिल्लामा उद्योग व्यवसायको अवस्था, चुनावी एजेन्डा, हस्तकला निर्यातमा गरिने पहलकदमी र आफू निर्वाचित भएपछि संघमा ल्याउने परिवर्तनलगायतका विषयमा दुवै अध्यक्षका प्रत्याशीहरू श्रेष्ठ र महर्जनसँग कारोबारका लागि सरस्वती ढकालले गरेको कुराकानी ः
तपाईंले संघको नेतृत्व लिन्छु भन्ने आधार के–के हुन् ?
ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ उद्यमी–व्यवसायीका लागि राम्रो सम्भावना भएको ठाउँ हो भन्ने मलाई लाग्छ । जसरी सम्भावना हामीसँग धेरै छन्, ती सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्नका लागि एउटा सफल, सक्षम र अनुभवी नेतृत्व चाहिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । मेरो प्यानलमा हुने जति साथीहरू हुनुहुन्छ, सबै जना युवा नेतृत्व र अनुभवसहित हामी आएका छौँ ।
म महासचिव हुँदा ललितपुर महोत्सव गरेका थियौँ, त्यो निकै रुचाइएको र सफल महोत्सव थियो । ५० औं वर्ष मनाइरहँदा एउटा पक्ष चुनाव नगरौँ भन्ने थियो, तर प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा चुनाव हुनु राम्रो हो । जति काम आफूले गरिन्छ त्यति मात्र प्रतिबद्धता गरौँ । लोकप्रिय बन्ने होडले एजेन्डा सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघको कार्यकारिणी समितिमा बसेर काम गरेको छु । सामाजिक कामहरूमा पनि उत्तिकै सक्रिय छु । सबै उद्यमी–व्यवसायी साथीहरूलाई आवश्यक पर्दा म उपलब्ध हुन सक्छु । यी कारणले संघको नेतृत्व मैले नै लिन्छु भन्ने विश्वास छ ।
देशको राजधानीसँग जोडिएको जिल्ला भए पनि ललितपुरमा खासै उद्योगधन्दा विस्तार हुन सकेको अवस्था छैन, के कारणले ललितपुर पछाडि परेको हो ?
हो, हामी काठमाडौं जिल्लासँग नजिक छौं, तर पनि दुर्गम जिल्ला जस्तै अवस्थामा छौँ । रिङरोडभन्दा बाहिर गयो भने ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ छ र भनेर सोध्ने गरेको समेत पाएको छु । वास्तवमा भन्दा ललितपुर बत्तीमुनि अँध्यारोमा रहेको छ । ललितपुरमा सम्भावना नभएका पनि होइनन्, तर ती सम्भावनालाई कार्यान्वयन गर्न नसकिएको हो । ललितपुरको दक्षिणी भेग पर्यटनका लागि निकै राम्रो सम्भावना भएको ठाउँ हो ।
त्यसको विकास र प्रवद्र्धनमा ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ चुकेको छ । दक्षिणी भेगमा जति पनि राम्रा क्षेत्र छन् त्यसको प्रवद्र्धन र ललितपुरभित्र होमस्टे सञ्चालनलाई विस्तारमा जोड दिनुपर्छ । आर्थिक अवस्था सुधारका लागि व्यापार विस्तार गर्नुपर्छ । बाबुबाजेले बनाएको कला–संस्कृतिलाई जोगाइराख्न मात्र सके पनि ललितपुरमा धेरै आयआर्जन गर्न सकिन्छ ।
ललितपुरलाई खासगरी हस्तकलाका लागि प्रख्यात जिल्लाका रूपमा लिइन्छ, निर्यात किन बढ्न नसकेको हो ?
नेपालको निर्यातमा १० प्रतिशतभन्दा धेरै हस्तकला निर्यात हुन्छ, जसको ८० प्रतिशत योगदान ललितपुरको मात्रै छ । ललितपुरमा जुन खालका कालिगढ छन् तिनको सीप बिस्तारै लोप भएर गएको अवस्था छ । म नेतृत्वमा आएँ भने उहाँहरूको रोजगारी र सीपमा विशेष ध्यान दिन्छु । अब हामी छिमेकी मुलुक भारत र चीन मात्र नभएर तेस्रो मुलुकमा पनि निर्यात गर्नु जरुरी छ ।
तेस्रो मुलुकमा हस्तकलाको बजारको खोजी गर्नु संघको अब आउने नेतृत्वको महŒवपूर्ण जिम्मेवारी हो । हामीले जुन सामान बनाएका छौँ त्यतिमै सीमित नभएर अब समय र सम्बन्धित देशको मागअनुसारमा हस्तकला बनाइनुपर्छ । ललितपुरले हस्तकलालाई मात्र प्राथमिकता दिएर आधुनिक तरिकाले व्यवसाय गरेमा आर्थिक उन्नतिमा फड्को मार्न सक्छ । मेरो नेतृत्व संघमा भयो भने हस्तकलाबाहेक अरू क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा पनि उत्तिकै जोड दिन्छु ।
अरू क्षेत्रको प्रवद्र्धन भनेको कुन–कुन हुन् ?
ललितपुर हस्तकलासँगै पर्यटनमा उत्तिकै सम्भावना भएको जिल्ला हो । ललितपुर पर्यटन उद्योगमा उत्तिकै राम्रो सम्भावना भएको जिल्ला हो । जति पनि पर्यटकहरू ललितपुरमा आउँछन्, एक–दुई दिनमा जाने गरेका छन् ।
हामीले होमस्टेदेखि पर्यटनलक्षित सुविधा दिन सके तिनीहरूको बसाइ लम्ब्याउन सकिन्छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव समग्र जिल्लाका आर्थिक विकाससँग जोडिएको हुन्छ । समय–समयमा विभिन्न महोत्सव, औद्योगिक प्रदर्शनीलगायतका काम गर्न सकिए जिल्लामा आर्थिक गतिविधि बढाउन सकिन्छ ।
तपार्इं महासचिव हुँदा संघमा गरेका केही राम्रा काम सम्भि“mदा कुन–कुन लिनुहुन्छ ?
ललितपुर महोत्सव नै सबैभन्दा धेरै सफल र रुचाइएको काम हो भन्ने मलाई लाग्छ । यसका साथसाथै सचिवालय सुधारका लागि पहल गरेको छु । त्यो सुधारमा निरन्तरता र पारदर्शिता कायम गर्न मेरो नेतृत्व आवश्यक छ । ललितपुर भरमा झन्डै २२ हजार प्यान नम्बर लिनेछन्, तर जम्मा १ हजार ७ सयले मात्र संघको सदस्य बनेका छन् । किन संघमा आउन व्यवसायीलाई इच्छा नभएको हो, सबैलाई समानुपातिक रूपमा संघमा आबद्ध गराउन पहल गर्छु ।
व्यवसायीहरू उद्योग–वाणिज्य संघमा किन आबद्ध हुन नचाहेका हुन् ?
ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ अहिले स्थानीय स्तरमा मात्र सीमित भएको छ । सदस्यहरूमा पनि त्यही मानसिकता भएर होला भन्ने मलाई लाग्छ । यसको दायरा बढाउनु जरुरी छ । जब दायरा र कामगराइमा पारदर्शिता हुन्छ तब व्यवयायीहरूको आकर्षण संघमा हुन्छ । त्यसका लागि मैले काम गर्ने योजना बनाएको छु ।
ललितपुर वाणिज्य संघमा तपाईं निर्वाचित भए आउने पाँच परिवर्तन के–के हुन् ?
पहिलो कुरा, सबै सदस्यको छाता संगठनका रूपमा संघलाई विस्तार गर्छु । ललितपुरमा व्यापार गर्ने जति पनि साथीहरू छन्, तिनीहरूलाई संघमा आबद्ध गराउन मेरो पहल कदमी हुनेछ । दोस्रो, पर्यटन प्रवद्र्धन गरी स्थानीय मानिसलाई सहभागी गराएर आर्थिक विकास गर्न पहल गर्छु । तेस्रो, ललितपुर हस्तकलाका लागि सम्भावना भएको क्षेत्र हो तर यहाँ कालिगढका समस्या धेरै छन्, तिनको समाधान र सीप हस्तान्तरणमा ध्यान दिन्छु ।
चौथो, ५० औं वर्ष मनाउँदै गर्दा पुराना सदस्य र कतिपय छोडेका सदस्यहरूलाई पनि सम्मानसहित संघमा आबद्ध गराउन चाहन्छु । र पाँचौँ, परिवर्तन अहिले ललितपुर महानगरपालिका पनि भएको छ । मेयर चिरिबाबु महर्जनले स्मार्ट सिटी बनाउने अवधारणा अगाडि सार्नुभएको छ त्यसमा संघले सहयोग गर्छ । ललितपुरलाई स्मार्ट सिटी बनाउने हाम्रो योजना छ ।
स्मार्ट सिटी ललितपुर वाणिज्य संघ